कोरोनाबाट ५२ लाख ८४ हजार बढी संक्रमित, अमेरिकामा करिब एक लाखको ज्यान गयो – Khabar Silo
कोरोनाबाट ५२ लाख ८४ हजार बढी संक्रमित, अमेरिकामा करिब एक लाखको ज्यान गयो
Posted on May 24, 2020 Author khabar silo Comment(0)
११ जेठ, काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ५२ लाख ८४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । यस्तै ३ लाख ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको छ ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा १६ लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै एक लाख पुगेको छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा १६ लाख २१ हजार ६ सय ५८ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा मृतकको संख्या ९७ हजार ४८ छ ।
यसैगरी रुसमा ३ लाख ३५ हजार ८ सय २२ जनामा संक्रमण भएको छ भने ३ हजार ३ सय ८८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
ब्राजिलमा ३ लाख ३ हजार ८ सय ९० जना संक्रमित छन् भने २१ हजार ४८ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
बेलायतमा २ लाख ५८ हजार ५ सय ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३६ हजार ७ सय ५७ छ ।
स्पेनमा २ लाख ३५ हजार २ सय ९० जना संक्रमित हुँदा मृतकको संख्या २८ हजार ६ सय ७८ छ ।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएको छ ।उनको बुधबार बिहान गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंमा निधन भएको नेपाली कांग्रेस बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ का सभापति द्रोण कुँवरले जानकारी दिए । ६६ वर्षीया छन्त्याल मुट सम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिइन् । बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ खुंखानीमा जन्मिएकी र बाग्लुङको ढोरपाटन […]
विभिन्न ठाउँबाट आउनेहरुको संख्या बढेसँगै स्वभाविक रुपमा संक्रमण बढ्ने उच्च जोखिम पनि रहन्छ । सार्वजनिक यातायातमार्फत् उपत्यका भित्रिनेहरुमा अझबढी संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तै सार्वजनिक यातायातमा तथा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्दा पनि संक्रमणको जोखिम बढेको हो ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संक्रमण बढ्ने जोखिमको आकलन […]
एकदमै खु: शीको खबर ! अनिता आफै हिड्न सक्ने भइन, अनुहारमा यस्तो चमक -हेर्नुहोस् पछिल्लो (भिडियो )
अनिता खडका र विनोद खडका यो जो’डीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान् ।यो जोडी नेपालकै एउटा न’मूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टिकटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्त’विकता निकै नै मा,’र्मिक र आत्मियताले भरि’एको छ । अहिले पछिल्लो समय अनिताको स्वास्थमा निकै नै सु’धार आएको छ । कुनै समय अनिताको शरी’रको तौल घटेर २७ किलोसम्म पुगेको […]
कपिलवस्तुका दश कोरोना सङ्क्रमित निको भएर फर्के